Thursday, 11.09.2017, 11:17am (GMT6.5)
यहि नोभेम्बर १७ तारीख हुन गैरहेको अक्सफाम टैलवाल्कमा भाग लिनका लागि ड्रागन एयरको उडान द्वारा आज बिहान टिम नेपाल हङकङ आईपुगेका छन। उक्त टिममा ट्रैल रनका लागि विश्वमै कहलिएका एलिट धावकहरु समीर तामाङ, पुर्ण तामाङ, तिर्थ तामाङ, बेद सुनुवार र उत्तम खत्री रहेका छन। टिमलाई पुर्ण तामाङको नेतृत्व गरेको छ। उक्त टिमलाई चेपलाक बिमानस्थलको आगमन कक्षमा हङकङबासी नेपालीहरुले खादा ओढाएर स्वागत गर्दै सफलताको कामना गरेको छ।
दौड हुनु एक साता भन्दा अगाडि आईपुग्नु भएको छ, डिफेन्डिङ च्याम्पियन पनि हुनुहुन्छ, रेकर्ड ब्रेक गर्ने योजना छ कि? तयारी, आशा र आत्मविश्वास कस्तो छ? भनी टिमको नेतृत्वकर्ता पुर्ण तामाङलाई सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिदै भने "रेकर्ड ब्रेक गर्नु भन्दा पनि दौड जित्ने हाम्रो पहिलो लक्ष हो, यसका लागि हामी सारिरिक र मानसिक दुबै रुपमा पुर्ण तयारी छौ। जित्न सक्ने आत्मविश्वास अनि छ। हामी टिमको तर्फ बाट सत प्रतिसत दिनेछौ। नेपालीहरुको शिर उचो पार्ने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ।"
दौड आगामी १७ तारिक शुक्रबार बिहान ७:३० बजे साईकुङ स्थित पाक ताम चुङ बाट शुरु भै पो लेङ कुक जक्किक्लब युन लोङ मा समाप्त हुनेछ। गत बर्ष यहि टिमले निर्धारित सय किलोमिटरको दुरि एघार घन्टा एक मिनेटको समयमा पूरा गरेको थियो। अहिले सम्मको कीर्तिमान १० घन्टा ५८ मिनटको रहेको छ।
उक्त टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबका हुन। आउटडोरका एक्टिभिजका लागि तयारी पोशाक बनाउने अवू कम्पनीले स्पोन्सर गरेका हुन।
सन १९७६ बाट अक्सफाम हङकङले आयोजना गर्दै आएको यो दौडको स्लोगन "हामी ट्रैलवाकर हौ" भन्ने रहेको छ। ४१ औ सस्करणको उक्त दौड म्याकलेहोज ट्रैलको १०० किलोमीटर लामो दौडमा ५२०० धावकहरुले भाग लिदैछन। उक्त दौड मार्फत आयोजकले ३६ मिलियन हङकङ डलर उठाउने लक्ष राखेको छ।